Global Voices teny Malagasy » Mpanao Gazety Shinoa Malaza Notsikeraina Fa Niteraka Tao Etazonia · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 25 Febroary 2014 11:09 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Naomy
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fifindràmonina, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Nitarika fahatairana tao amin'ny aterineto ny iray amin'ireo mpanao gazety malaza indrindra ao Shina, Chai Jing , rehefa avy niteraka tao Etazonia, misy mihitsy ireo mpiserasera miantso azy ho “mpamadika” na “liberaly mpihatsaravelatsihy”».
Rehefa avy navoaka antserasera ny sarin'i Chai mitaiza zaza menavava tao amin'ny seranam-piaramanidina, nipoitra ny vaovao fa niteraka vavikely tao Etazonia izy tamin'ny volana Oktobra 2013. Mazava fa ny tombontsoany dia lasa olom-pirenena Amerikana Etazonia ilay zaza.
Mpanao gazety manana ny maha-izy indrindra ao Shina i Chai, fantatra amin'ny faharanita-tsainy, ny faharetany ary izy mivatambatam-piteny amin'ny fandaharany resadresaka. Nanomboka malaza ny anarany tamin'ny fitantarany ny aretina SRAS tamin'ny 2003 sy ny hovitrovitry ny tany tao Sichuan tamin'ny 2008.
Chai Jing mitaiza ny zanany tao amina seranam-piaramanidina. Sary avy amin'ny Sina Weibo
Nandiso fanantenana ny maro tamin'ireo mpankafy azy i Chai niteraka tao Etazonia, ka maro ireo niantso azy ho mpihatsaravelatsihy.
Mpiserasera “Tan” nanoratra hoe :
Tokony ho takatsika fa mamely na mitsikera ny firenena niaviany ireo olo-malaza ireo, tsy hoe satria tian'izy ireo ity firenena ity fa mahavita manoroka an'i Etazonia, Eoropa, sy ny firenen-kafa izy ireo indray andro any. Karazan'olona manao ahoana izay mitsikera ity firenena ity no mahitsy fo kokoa? Tsy iza fa ireo hijanona ho Shinoa hatrany.
Na dia izany aza, maro ihany koa ireo olona naneho ny fanohanany. Malahelo kosa ny sasany manoloana ny fivoaran'ny fifindra-monina eo amin'ireo Shinoa saranga antonony, miantso ny tokony handinihan'ireo Shinoa mpitondra ambony:
Manaiky tanteraka ny zava-misy, tokony handinika ny antony mahatonga ny zavatra tahaka izao mitranga ireo olona ambony. Raha mieritreritra ny hoavy, afaka misafidy firenena amin'ny rafitra marina, mitovy sy metimety kokoa hoan'ny zanany izy. Tsy anjaran'ny hafa ny mitsikera izany. Raha mahavita ianao, hanao ho Olom-pirenen'i Etazonia ve? Eritrereto izany ary ho fantatrao.
Isika, ny tenantsika ihany dia tsy afaka manova ny toe-javatra mifikitra mafy amin'izao fotoana ato amin'ity firenena ity, tsy afa-mandrotsa-bato isika, nahoana no tsy afaka mitondra fanovana hoan'ny zanatsika isika? Fahalalahana sy raharaha manokan'i Chai Jing ny manapa-kevitra izay toerana na firenena tiany hahaterahan'ny zanany.
Mpaneho hevitra Liu Xuesong nanoratra hoe  [zh]:
Na tia tanindrazana ny olona iray na tsia, ny tena zava-dehibe indrindra dia tsy ny fahafantarana izay toerana nahaterahan'ilay zaza, fa ny mijery ny andraikiny amin'ny maha-olom-pirenena ao amin'ity firenena ity, sy ny isan'ny zavatra tsara vitany. Na dia izany aza, misy ifandraisana amin'ny fahatsiarovan-tena iombonana ao amin'ny firenena ny fitiavana ity firenena ity, izay tokony hampiseho fitiavana, firindrana, fifankatiavana ary fahalalahan-tanana , ary mifantoka amin'ny fandrosoana, fahamarinana ary ny sivilizasiona.
Mpiserasera hafa nanoratra hoe  [zh]:
Nilaza ny mpiserasera sasany fa tian'i Chai fotsiny mba hanana fiainana araka ny tokony izy kokoa ny zanany, izay tsy misy idiran'ny fitiavan-tanindrazana. Angamba ity ny olana tokony hodinihan'ny governemanta.”
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/02/25/58084/
 nanoratra hoe: http://weibo.com/2475079157/AxS7Uj6DE
 nanoratra hoe: http://weibo.com/3958597234/AxNJRm95l
 nanoratra hoe: http://weibo.com/2420933091/AxSdsh6hq